Iteyipu yokunamathisela eshisayo yezicathulo
I-L043 ingumkhiqizo wezinto ze-EVA ofanelekile ukugoqwa kwezicucu ze-microfiber ne-EVA, izindwangu, iphepha, njll. Kukhethwe labo abafuna ukulinganisela ukumelana nokushisa kwesikhashana kanye ne-higer temprature. Le modeli yenzelwe ikakhulukazi indwangu ethile ekhethekile efana ne-Oxford clo ...
I-HD112 ngumkhiqizo owenziwe nge-polyester. Le modeli ingenziwa ngephepha noma ngaphandle kwephepha. Imvamisa kuvame ukusetshenziselwa ukumboza i-aluminium tube noma iphaneli. Sikwenza kube ububanzi obujwayelekile obungu-1m, obunye ububanzi kufanele benziwe ngendlela oyifisayo. Kunezinhlobo eziningi zokufaka isicelo zalesi sici. I-HD112 iyasetshenziswa ...